Kwezemidlalo: Siphatha Imbali Yempilo Yomdlali Wenguqu uGeorge Chigova
Mpalakazi 18, 2013
George Chigova(Umfanekiso uthethwe nguJoseph Njanji)
BULAWAYO — Intathelizindaba yeStudio Seven yezemidlalo uJoseph Njani usethulela ingxoxo ayenze lonozinti weqembu leDynamos uGeorge Chigova yena ongomunye wabadlali abalitshumi lanye abakhethwe ukuba yibo abadlale kuhle kusizini yalonyaka emdlalweni kanobhutshuzwayo.
UChigova, oleminyaka engamatshumi amabili lambili yokuzalwa-(22), ukhulele emgodini we How Mine obucwadlana nje ledolobho lakoBulawayo kodwa amaqembu akoNtuthu ehlulekile ukunanzelela ithalenta lakhe waze wathathwa liqembu le Aces Youth Soccer Academy elamfaka esikolo se Lord Malvern.
Esuka kuqembu le Aces uChigova udlalele iqembu le Gunners asuke kulo esesiyadlalela iqembu le Dynamos lona aselidlalele okweminyaka emibili njalo lonyaka udlale kuhle okuze kwenza abukwe ngumphathintambo wezemidlalo lamasiko uAndrew Langa ngesikhathi kusetheswa inkatha abadlali abangene kukhalenda yama soccer stars yalonyaka oqhutshelwe esigodlweni iHarare ngeviki edluleyo.
UChigova uyingxenye yeqembu lesizwe elizakuyaphatheka kumncintiswano weAfrican Nations Championships ozaqhutshelwa elizweni le South Africa ngomnyaka ozayo njalo uthi yena amathuba aleliqembu kulimidlalo mahle kakhulu.
Lunozinti uthi ukhangelele ukuthi nxa engadlala kuhle kumidlalo yeChan athengwe ngamaqembu aphandle kwelizwe njengoba limidlalo izabukelwa ngabantu abanengi abaphuma emazweni atshiyeneyo.
Okwamanje uChigova lamanye amalunga eqembu lama Warriors baphakathi kwamalungiselelo okuzilolonga phambilini kwemidlalo yeChan yona ezaqala mhla zilitshumi lanye kunyanga kaZibandlela ngomnyaka ozayo.